Kunengqondo ukuphetha ngokuthi kungaba lula kunaleyo ukubuza umbuzo? Nokho, zikhona imithetho eminingi kanye ukuhluka imibuzo kokubili ngesiNgisi kanye ngesiRashiya. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwazo ingxoxo njalo kuncike isimo inkulumo. Futhi yeka indlela esibheke kuzokwenza isimo like kule nguqulo yesiNgisi nezingxoxo Russian kuyafana. Ake sihlole imihlobo yemibuzo ngokuningiliziwe kulesi sihloko.
Yiziphi izinkinga isiRashiya?
Kuleli phephandaba sicabangela 5 imihlobo yemibuzo. Kukhona nezinye izindawo eziningana lapho ngeengaba, inani imibuzo ziyahlukahluka, kodwa namuhla focus kule.
Ngakho, ngokuvumelana ngezigaba wethu, kukhona ezinhlanu imihlobo yemibuzo: uvaliwe, evulekile, ukuvula, bokukhuluma, imibuzo yokuzihlola. Qaphela ukuthi imibuzo evulekile kanye evaliwe ivelele cishe zonke izinhlobo ngeengaba. Lokhu kuveza kubo ukhiye.
Manje sibheke uhlobo imininingwane ngamunye, futhi unike ezinye izibonelo.
Imibuzo evuliwe - lena imibuzo edinga impendulo enemininingwane futhi iyiphi incazelo. akunakwenzeka ukuyiphendula noma "yebo" noma "cha." Lemibuto siqale esilandelayo amazwi interrogative: "kanjani", "ngubani", "yini", "kungani", "kangakanani", "indlela", njll ...
Imibuzo enjalo uvumele wokuhlola yakho ukukhetha ilwazi ukuphendula uwedwa. Ngakolunye uhlangothi, lokhu kungase kuholele ekubeni iqiniso lokuthi lomthombo ukufihla iqiniso lokuthi wayengeke ukudalula. Kodwa ngakolunye uhlangothi, uma ubuza umbuzo esimweni ngokomzwelo ezifanele, interlocutor kungavula futhi bakutshele okungaphezu umbuzo odingekayo ocele.
imibuzo levulekile zikuvumela ukuba ujike Monologue yakho engxoxweni. Nokho, kukhona ingozi ukuthi uzolahlekelwa ukwazi ukulawula ingxoxo, futhi babuyele control kuyoba nzima.
Nazi ezinye izibonelo imibuzo enjalo:
Kungani ufuna eyunivesithi yethu?
Uma ukhetha ukwamukela le ngxoxo?
Kangakanani uhola ngenyanga?
Ubani obhekene nomsebenzi wokuhlanza ekhaya lakho?
Imibuzo ohlobo avaliwe - labo ekuphenduleni ezingaba iphendulwe noma "yebo" noma ". Kungekho" kuyizinhlayiyana "uma" livame ukusetshenziswa ezindabeni avaliwe. Bona constrict nenkululeko esiphezulu interlocutor, okwamenza monosyllabic izimpendulo.
Ngokubuza imibuzo enjengokuthi, singakwazi ukugcina ingxoxo ngaphansi kolawulo. Nokho, uma enye inhlangano akakwazi ukuveza umbono noma ukwabelana ngemibono.
Ngaphezu kwalokho, ivaliwe nalevulekile eziningi izici ezingezinhle:
etholwe izimpendulo zale ulwazi ngeke ukuvundulula;
ezimbili okufanele akhethe kuzo kunikeze umuzwa yokuphoqelela abantu esenzweni esithile, ngakho umthombo yenu kuyovumelana kancane kancane uzizwa ungakhululekile ukuthi ekugcineni hi yokuthi afuna ingxoxo ngokushesha ngangokunokwenzeka;
wona aholela ukwenqena interlocutor ekuvuleni nasekwandiseni ukunikeza ulwazi oluthe xaxa.
imibuzo Kuvaliwe Kunconywa ukuba isetshenziswe ezimweni lapho kuyadingeka esikhathini esifushane ukuze abuthele ulwazi oluningi. Ngokwesibonelo, lapho siqhuba izifundo ezihlukahlukene. Uma ufuna ukumazi interlocutor yakhe, futhi bacabanga ukuthi ukwazana sakho sizoqhubeka, ivaliwe imibuzo ngempela kufanele alternated nge evulekile, okuvumela umlingani ukukhuluma.
Ungathanda ukufunda ukubhukuda?
Ingabe ukudlala insimbi yomculo?
Siyaqhubeka cabanga imihlobo yemibuzo. Isinyathelo esilandelayo - ubuza umbuzo ongafuni mpendulo, okuyinto ezijulile futhi full-scale Ukubuyekeza sendaba ingxoxo. Imibuzo enjalo Akunakwenzeka ukunikeza impendulo ocacile futhi engachemile. injongo yayo ibonisa izinkinga ezivelele kubangele izinkinga ezintsha noma kubangele ukusekela umbono wakho amaphaneli ngemvume ngeziphansi. kuyizinhlayiyana "uma" Kanti futhi ivame ukusetshenziswa ekulungiseleleni lezi zinto.
Sonke ukwabelana imibono efanayo ngale ndaba?
Singakwazi yini ngokuvamile azibonayo izenzo ezinjalo?
Olunye uhlobo eziyisisekelo daba - turning. Lawa izindaba enesandla nokugcinwa kwengxoxo indlela ethile. Bangaphinde ukukhonza ukukhulisa izinkinga ezintsha. Bacele kulezo izimo lapho uthola ukwaziswa okuningiliziwe inkinga futhi ufuna ukushintshela ukunakwa izethameli kwenye, noma lapho yayikhona ukumelana abaphikisi futhi ufuna ukuyinqoba.
Interlocutor izimpendulo zemibuzo enjalo uzothola amaphuzu sengozini izahlulelo zakhe.
Ngitshele, ucabanga ukuthi yini ukuthi ithengwe? ..
Empeleni uyaya? ..
Ubonani esikhathini esizayo? ..
Umbuzo okufanele licatshangwe
Lezi zinhlobo zemibuzo ukusiza ukuqinisekisa ukuthi lohlolwako wazindla futhi ngokucophelela wacabangisisa ngalokho okwashiwo ngaphambili, balungisa amazwana. Esimweni esinjalo, umthombo inkulumo has ithuba lokwenza izinguquko zabo siqu kakade evezwe othile Ukuma. Lokhu kukuvumela ukuba sibheke inkinga okuvela ezinhlangothini eziningana.
Iimbonelo zemibuzo enjalo:
Ucabanga ukuthi? ..
Ingabe siyaqonda umbono wakho ngalokho? ..
Uyavuma ukuthi? ..
Ngakho, siye sahlola ukubaluleka kanye tetinhlobo imibuzo elisetshenziswa isiRashiya.
Zingaki izinhlobo imibuzo ngesiNgisi?
NgesiNgisi, kukhona izinhlobo eziningana imibuzo. Zonke kubo, kanye ngesiRashiya, ezinhlanu. Sebenzisa izindaba kuzoncika isimo, simongcondvo injongo okuyiwona ebabuza. Ngakho, cabangela izinhlobo imibuzo ngolimi lwesiNgisi nge izibonelo.
imibuzo Jikelele kuthiwa ezifanayo uvaliwe isiRashiya, ukuthi, awathathe impendulo emifushane: ". kungekho" "yebo" noma Asetshenziselwa ukuthola ulwazi olujwayelekile kuphela.
Imibuzo enjalo ihlanganiswe ngaphandle amazwi interrogative, bese uqale nge tento. Futhi njengoba ungase ukhumbule, ngolimi lwesiNgisi isikhathi ngasinye enikeziwe ezithile nezinsizasenzo.
I-oda izwi ekulungiseleleni udaba: sento asizayo - kuncike - esenzweni esisho - umphelelisi - ukuzimisela.
Akayena umnakekeli omuhle?
Ingabe waphonsa ukuya disco namuhla?
Ingabe ukudlala i-basketball nsuku zonke?
Siyaqhubeka cabanga imihlobo yemibuzo ngolimi lwesiNgisi nge izibonelo. Lolu hlobo ngokwahlukana ngokuthi ngoba liqukethe izingxenye ezimbili, ahlukaniswe ngekhoma:
Ingxenye 1 - lesi sitatimende;
Ingxenye 2 - "impande", umbuzo mayelana nalesi sitatimende.
"Spine" ngokuvamile isitatimende okuphambene. Yileyo injongo umbuzo - ukuqinisekisa ubuqiniso egomela.
Wena ukudlala i-basketball nsuku zonke, akunjalo?
Steven kuyinto umdwebi odumile, akuyona kwakhe?
Imihlobo yemibuzo abangaba ukuze uthole olunye ulwazi. Ngokwesibonelo, umbuzo ekhethekile. Yena uzoqala ngamazwi interrogative. Ngokuvamile, lokhu okulandelayo :. Lapho, kungani, kuphi, okuyinto, indlela , njll La mazwi ezingelona iqiniso lokho ongayifaka nanokuthi ubani, uma benza indima ndaba.
Ngakho, udaba ngokohlaka olulandelayo: Umbuzo izwi - sento asizayo - kuncike - esenzweni esisho - umphelelisi.
Nini ukuya e-England ngesikhathi sokugcina?
Imibuzo noma ( "noma")
nezindaba ezinjalo zithinta lokuzikhethela phakathi ezahlukeneyo ezimbili ezahlukene izimpendulo. I-oda izwi kuyafana e umbuzo jikelele, kodwa kubaluleke kakhulu ukunikela inketho okunye.
Ingabe wena uthanda itiye noma ikhofi?
Ingabe uya eMoscow ngendiza noma ngesitimela?
Ingabe ubaba wakho noma umama wakho ukukusiza ngomsebenzi wesikole sakho?
Umbuzo nobani (lokho)
Lolu hlobo isetshenziswa uma udinga ukubuza umbuzo nendaba emshweni. It uzoqala ngala mazwi yini noma ubani. Isici esiyinhloko lolu hlobo mbuzo iwukuthi oda amagama ludwetshwa uhlala iyafana esitatimendeni. Okungukuthi, abangabantwana kwamagama Ngakho: ngubani / lokho - Isenzo semantic - umphelelisi.
Nazi ezinye izibonelo:
Ingubani le ndoda?
Kuyini lokho okwakubalulekile?
Ngakho, sahlola izinhlobo kungenzeka imibuzo kokubili ngesiRashiya bese ngesiNgisi. Njengoba singabona, ngazo zombili lezi zilimi, naphezu umehluko omkhulu umsuka kanye lolimi phakathi kwabo, imibuzo mayelana enza umsebenzi ofanayo. Lokhu kusitshela ukuthi ingxoxo nganoma yiluphi ulimi Kwenziwa imigomo ethize. Ngaphezu kwalokho, ulawula intuthuko yokucabanga, nezindaba adjustable futhi afana nalawa.
Igama iminwe isandla ngesiRashiya nesiNgisi
Virgo futhi Aquarius: imizwa yibhange